Homeसमाचारएलिना चौहानको स्वरमा रहेको ‘तिम्रै हुन मन छ’ बोलको गीत सार्वजनिक(भिडियो हेर्नुहोस्)
December 24, 2020 admin समाचार 9052
मोडल समिक्षा पोख्रेलको अ’भिनयमा रहेको नयाँ भिडियो सार्वज’निक भएको छ । तिम्रै हुन मन छ बोलको गीतको भिडियो सार्व’जनिक भएको हो । भिडियोड्रिम्स गेट इन’टरटेनमेन्ट युटुब च्यानल मार्फत सार्व’जनिक गरिएको छ ।
उक्त भिडियोमा समिक्षाको साथमा बुद्द कार्कीको अभि’नय रहेको छ । एलिना चौहान र गौरभ गिरीको आवा’जमा रहेको गीतको भिडियोलाई गायक गिरी स्वयमलेनै नि’र्देशन गरेका हुन । उत्तम हुमागाँइले छायाकंन गरेको भिडियोलाई अनिल रानाले स’म्पादन गरेका हुन ।
मेरो यो मन मन्दिरमा नामक म्युजिक भिडियो मार्फत मोडलिङ करिअर सुरु गरेकी समिक्षा पोख्रलले ३० भन्दा बढि भिडियोमा अ’भिनय गरिसकेकी छन् । यो नाम म्युजिक भिडियो इन्ड्रटीमका लागि परि’चित नाम हो । – न्यूज24बाट
पललाई भेट्न गएका विशाल रुँदै फर्किए?? जेलमै रोएपछि पलले के भने?? हे’र्नुहोस भिडियो
April 13, 2022 admin समाचार 1074
नाम विशाल स्याङ्जा’ली उनी नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा एक कोरस डान्सरको रुपमा प’रिचित रहेका छन्। उनले पल साह रहेका भिभिन्न कोरस् डान्स’रको रुपमा काम गरेका छन्। उनी पनि ना’यक पल साह लाई भेटनको लागि तनहुँ कारागार
February 4, 2021 admin समाचार 7706
April 19, 2021 admin समाचार 5478